Qatar kasoo socota Ciidanka Ethiopia ee Somalia-Qore: Cabdulaahi Ibrahim | Voice Of Somalia
Ciidamada shisheeye ee ku sugan dalkeena Soomaaaliya, ayaa bilaabay laynta dadka rayidka, Iyadoo aan la aqoon falalka ku xanbaaraya ficiladaasi cadowtooyada ah. Talaabadan ay qaadeen guud ahaan ciidamadan Africanka, gaar ahaan kuwa ka socda dalalka Burundi iyo Uganda, ayaa ka yaabisay dad badan, Kuwaas oo aaminsanaa in ciidamadani ay dalka u yimaadeen sidii ay u caawin lahaayeen dadka Soomaaliyeed, halka dadka qaarna ay filayeen in waxan iyo wax ka sii xunba laga filan karo ciidamadan maadaama ay ka soo jeedaan dalal aan laga ixtiraamin xuquuqda bini’aadamka sida Itoobiya oo kale.
Sida aan korba ku soo xusay ciidamada Amisom ee sugan dalka Soomaliya, ayaa bilaabay dilka dadka rayidka ah, Iyaga oo aan u kala soocaynin rag iyo dumar, da’ iyo dhalinyaro, Kuwaaas oo si bareer ah dadka ugu laayey, islamrkaana ugu laynayo hadda gobolada ay ka midka yihiin Gedo, Hiiraan, Shabeelada Hoose, Baay iyo waliba gobolka Bakool. Dilka dadkan rayidka ah, ayaa noqday mid soo noqnoqda maadaama ay ka aamuseen, Islamarkaana ay dhagaha ka fureysteen kuwii dadkaasi u sheeganayey in ay dowlad u yihiin sida hadda dhacdayba.
Dhacadadii ugu foosha xumeyd, islamarkaana ugu danbeysay, ayaa waxaa ay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Halgan oo dhaca duleedka magaalada Baladweyne, halkaasi oo dad rayid oo u socday goob tacsi ah ay joojiyeen ciidamo Itoobiyaan ah, Kuwaas dadkii rayidka ahaa ka dajiyey gaarigii ay wateen, dabadeedna la aaday meel howd ah, ka dibna halkaasi ku laayey. Waxyaabaha la yaabka leh ee ay dhacdadani banaanka u soo saartay, islamarkaana ku tusinaya cadaawadda Itoobiyaanka, ayaa waxaa ka mid ah in ciidamada Itoobiya xitta ay ka xishoon waayeen dumarkii uurka lahaa ee gaarigaasi la socday. Ninkii badbaadin waayey dumar uur leh tolow yaa ka fakanaya ?
Ciidamada Itoobiya, waxa ay ahayd haddii ay wax un badbaadinayaan in ay badbaadiyaan dumarkii uurka lahaa ee gaarigaasi la socday, maadaama ay marka hore yihiin dumar marka xigana ay leeyihiin uur. Dhacdadan foosha-xun ee ay ciidamada Itoobiya kula kaceen dumarkaasi, ayaa u muuqata fariin ay ciidamadan u dirayaan qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed sida siyaasiyiinta, aqoonyahanka, culimada, dhalinyada, dumarka, iyo waliba qurba-joogta Soomaaliyeed, taas oo ay Itoobiyaanku ku leeyihiin ma jirto cid naga badbaadeysa xitaa dumarka uurka leh.Ma’aha markan markii ugu horeysay ee ciidamada Itoobiya ay dilaan dad rayid ah, ee waxaa ka horeeyey dhacdooyin badan oo runtii xanuun badan lahaa, sida kuwii ka dhacay deegaano ku yaallo gobolka Bakool oo kale, halkaaso oo lagu laayey dad badan oo rayid ahaa, kuwaas oo loogu tagay guryahooda ka dibna lagu dilay, Iyagoo aan waxba galabsan. Ciidamadan Itoobiyaanka, ayaa ah hadda kuwa ugu badan ee ay gacmahooda ku baxayaan dad badan oo Soomaaliyeed, Waxaana tusaale u ah dhowrkii dhacdo ee ugu danbeeyey ee ka kala dhacay gobolada Baay, Bakool iyo waliba Hiiraan.
Xasuuqyadan ay geysanayaan askartan Xabashida ah, ayaa waxa ay runtii na soo xusuusinayaa dhibaatooyinkii ay dalkan ka geysteen dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo ay ku baxeen kumanaan kun oo Soomaaliyeed oo u dhintay kaliya in ay Soomaali ahaayeen. Bal is weydiiye maxay galabsadeen dadkii lagu laayey duleedka Buurhakaba iyo waliba kuwii lagu dilay gobolka Bakool ? Yey wax ka wateen ? Mise waxaa loogu aargudaayey askartii Xabashida uga dhimatay deegaanka Jameeco ee dhaca duleedka Buurhakaba ?
Waxaa si la mid sida ciidamada Itoobiya oo kale Iyagana bilaabay laynta dadka rayidka ah ciidamada Kenya, Burundi iyo waliba kuwa Uganda, Kuwaas oo dad badan oo rayid ah ku laayey gobolada Jubada Dhexe, Jubada Hoose, Gedo iyo waliba gobolka Shabeelada Hoose. Tusaale ahaan ciidamada Kenya, waxa ay si joogta ah diyaarado ugu duqeeyaan deegaano badan oo ku yaallo gobolada aan kor ku soo xusnay gaar ahaan gobolka Gedo oo kale, halkaasi oo ay ku le’deen dad badan iyo xoolohooda.
Dhacdadii ugu naxdinta badneyn ee ay geysteen ciidamadan shisheeye, ayaa ka dhacday magaalada Marka, halkaas oo lagu laayey qoys dhan oo u dabaaldageyey farxad aroos, kuwaas oo farxaddoodii isu badashay murago iyo naxdin ka dib markii la laayey dhamaan qoyskii oo uu ku jiro aabihii qoyskaasi. Ciidamadan, ayaa sidoo kale dadka rayidka ah jiirsiiya gawaaridooda waaweyn gaar ahaan kuwa ku dhex safra magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale, taas oo tusaale kale u ah dhibaatada ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed.Askartan shisheeye, ayaa caradooda kula duldhaca dadka rayid ah mar alaale iyo markii la xanuujiya ama uu qasaaro ba’an ka soo gaaro weerarada uga yimaada Xarakada Al-shabab. Tusaale ahaan, maxaa lagu fasiri karaa marka la laynayo dad rayid ah oo guruahoohda jooga oo aan waliba hubeysneyn, Kuwaas oo haddi laga shakiya la soo xiri karo ? Maxaase lagu tilmaami karaa marka la dilayo dumar uur leh iyo waliba dad waayeel ah ? jawaabtu way iska caddahay (aargudasho iga dheh)
Mar haddii waxaan oo dhib ay geysanayaan ciidamadan Shisheeye, Islamarkaana uu dagaalkan u muuqdo mid sii dabadheeraanayo, Hadaba qataro intee la eg baa ka soo socda ciidamadan Shisheeye, gaar ahaan kuwa Itoobiya ee aan sharcigu qaban ? Anigu, waxa ay runtii iigu muuqataa in ay dhibaato badani ka soo socoto ciidamadan Amisom, waayo waa marka hore ma jirto cid Soomaali ah oo la xisaabtami karta, Waa marka labaade ma ‘ahan ciidamo ka yimid dalal ku dhaqma sharciga, Islamarkaana ilaalila xuquuqda bini’aadamka. Tusaale ahaan, maxaa laga filan karaa ciidamo ka yimid dalal ay digtaytaro (dictator) ka taliyaan sida Itoobiya, Uganda iyo Burundi oo kale ?
Maxaase laga filan karaa askari ilaalin waayey xuquuqda muwaadiniinta dalkiisa ? Ma aragteen sida ay ciidamada Itoobiya ula dhaqmaan dadka rayidka ee Itoobiyaanka ah ? Anigu, waan qoslaa runtii marka aan maqlo Madaxweynayaasha Uganda, Burundi iyo Itoobiya oo warbaahinta ka sheegayo in ay Soomaliya ka caawinayaan dhismaha dowlad ku dhaqanta sharciga, islamarkaana dimoqoraadi ah, Waxaana is weydiiyaa waa maxay dimuqoraadiyadda iyo dhowrista xuquul insaanka ee ay ka hadlayaan digtaytaradan. May dalalkoodu u raadiyaan waxa ay sheegayaan !
Midda kale, sow lama oga in joogista ciidamadan shisheeye ay ka dhalanayaan dhibaatooyin badan oo isugu jira kuwa caafimaad, kuwa bulsho, kuwa dhaqaale, kuwa diimeed iyo waliba kuwa siyaasadeed oo kala dhantaali kara midnimada iyo madaxbanaanida dalka ? Sow dadku ma’oga in dalalka ay ka soo jeedaan ciidamadan shisheeye marka laga reebo dalka Jabuuti in ay yihiin dalal uu dilooday cudurka ADIS-ka sida Itoobiya, Burundi iyo Kenya oo kale ? Maxaase laga faa’iidey faragelinta ciidamada Kenya oo aan dhibaato ahayn ?
Marka aan hadalka soo uruuriyo ma jirto wax faa’iido ah oo ku jirta joogista ciidamo shisheeye, gaar ahaan kuwa ka socda dalalka dariska ah sida Itoobiya oo kale, Maxaa yeelay joogistoodu waxa ay abuureysa dhibaatooyin badan oo aan horay u jirin. Waxa ay sidoo kale joogistooda yareyneysaa rajadii laga qabay dhismaha ciidan soomaaliyeed oo xoogan, Waana sababahaasi sababaha aan markasta uga soo horjeedo ciidamo Shisheeye magacay rabaanba ha wataane. Bal fiiriya dhibaatada ay faragelinta Itoobiya u geysatay siyaasiyiinta ay ka midka yihiin Maxamuud Sayid, kaliil, Aw-libaax iyo Xasan Dheere. Goormay Itoobiya noqotay saaxiib la isku haleeyo !!
Gaba gabadii iyo gunaanudkii, Waxaan soo jeedinayaa talooyin dhowr ah oo aan is leeyahay waxa ay xal u yihiin dhibaatada ay geysanayaan ciidamadan shisheeye ee aan waxba soo kordhin doonin ee waqti dhumiska ah, Islamarkaana dalkeena u yimid sidii ay hanti oga sameyn lahaayeen dhiigga dadkeena.
1- In la soo xiro dhamaan askartii iyo saraakiishii shisheeye ee masuulka ka ahayd dilkii loo geystay dadkii rayidka ahaa lagu kala laayey gobolada Hiiraan, Baay, Bakool iyo Shabeelada Hoose.
2-In dalka laga saaro dhamaan ciidamada shisheeye inta aysan dhicin dhibaatooyin ay adkaan doonto in wax laga qabto.
3-In la soo xiro dhamaan gudoomiyaasha gobolada Hiiraan, Sh/Hoose, Baay iyo Bakool maadaama ay gabeen masuuliyaddii ka saarneyd ilaalinta dadka rayidka ah.
4-In dadka rayidka ah ay ka foogaadaan goobaha ay degan yihiin ciidamada Shisheeye, Islamarkaana ay naftooda la caraaraan marka ay qarax maqlaan.
5-Si looga maarmo ciidamo shisheeye in la raadiyo xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro khilaafyada u dhexeeya dhinacyada isku hayo siyaasadda dalka sida Dowladda Federaalka iyo Xarakada Al-shabab oo kale.
W/D: Cabdulaahi Ibrahim